I-Sunlit Grand Teton Chalet (Indlu Yangasese) - I-Airbnb
I-Sunlit Grand Teton Chalet (Indlu Yangasese)
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Ian And Sonja
Ukungena okuyimfihlo ngokuphelele kwe-chalet yendaba yesibili, i-Teton basecamp yakho! Ukukhanya kwemvelo, ukwakheka okuvulekile nophahla lwesonto lombhishobhi kulinde wena / umuzwa obanzi negumbi lokuphefumula. Ifaka ikhishi elihlome ngokuphelele, isevisi yekhofi etholakalayo, 4 bar stools w/ setting, 2 heavenly Tempurpedic queen beds, i-futon entsha sha (elala kufika ku-2), 40” i-smart TV & ne-motif eyiqiniso yesimanje/yasentshonalanga yokusetha i-vibe. Itholakala endaweni yomndeni ephephile futhi ethule w / ukufinyelela kalula kuJackson kanye neGrand Targhee!
I-Grand Teton Chalet iyindawo enikelwe wena. Ngeke uthole izinto zomuntu siqu endaweni osiqashayo. Ukungena okuphephile nokuyimfihlo! Ukukhanya kwemvelo, ipulani yaphansi evulekile kanye ne-Western motif kudala umuzwa othokomele nowokwamukela. Itholakala phansi kweTeton Pass eTeton Valley. Uzokwazi ukufinyelela kalula e-Jackson Hole, i-Jackson Hole Mountain Resort, i-Grand Targhee Resort kanye nemizila eminingi, imifudlana neziqongo ezitholakala khona kanye ngaphandle komnyango wakho!
4.95 out of 5 stars from 316 reviews
4.95 · 316 okushiwo abanye